INkosi kwiiGeometri zoMthetho. -Geofumadas
Ikhaya/Iiphotography/INkosi kwiiGeometri zoMthetho.
IiphotographycadastreUkufundisa i-CAD / GISGeospatial - GIS
Yintoni onokuyilindela kwi-Master kwiiGeometri zoMthetho.
Kuyo yonke imbali kuye kwagqitywa ukuba i-cadastre yearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba sesona sixhobo sisebenzayo kulawulo lomhlaba, enkosi koku, amawaka eedatha yendawo kunye nezomzimba ezinxulumene nomhlaba ziyafunyanwa. Kwelinye icala, sibonile ukuba kutsha nje INkosi kwiiGeometri zoMthetho, iprojekthi enomdla yeYunivesithi yasePolytechnic yaseValencia, kwaye ikhuthazwe siSikolo soBugcisa esiPhakamileyo seGeodetic, Cartographic kunye neTopographic Engineering. Ukungeniswa kweli gama "iJometri yezomthetho" kunomdla, ke safumana omnye wabameli bale Master ukucacisa amathandabuzo aza nengcaciso yawo.
La UGqirha Natalia Garrido Guillén, Umlawuli we-Master kunye nelungu leSebe leCartographic Engineering, iGeodesy kunye nePhotoogrammetry yeUniversitat Politècnica de València, ityhila iziseko ze-Master, amahlakani athabathe inxaxheba kule projekthi, kunye nezizathu zokuba kungani yenziwe.
Siqala ngenkcazo esisiseko, ukuba sifuna igama "IJometri yomthetho" kwiwebhu ichazwa njengokudityaniswa kwemathematics emthethweni, ngakumbi ukusetyenziswa kwamanani ejiyometri ukwenza imida. UGqirha Garrido usixelela ukuba le nkcazo ichanekile.
IJometri yezomthetho ichanekile yile, ukukhangela ukudityaniswa koMthetho kwiinkqubo zobugcisa zokucandwa kwepropathi, kuba le, ipropathi, ayisiyonto yomthetho. Umbuzo ohleli emoyeni ukwazi ukuba le nkcazo igxilwe ngokwemigangatho yesenzo se-cadastre. U-Natalia uphawula ukuba ngandlela ithile ewe- iphantse yafana naleyo ye-cadastre-, kodwa ngakumbi eSpain, kuba akukho cadastre yejiyometri apho, kuba imephu ayikhange yenziwe ngokulungisa umda.
Ngapha koko, ifuna ukuziqhelanisa, kunye nokulibaziseka kweminyaka emihlanu, kuloo mfuno yokulungelelanisa zombini ihlabathi. Kwaye iyayifuna ngokuzenza ngathi amagcisa ngabo abakhokela olu nxibelelaniso, kuba ilungile inendawo yayo efanayo kwipasile yejometri. Ke ngoko, ewe, iqulunqwe kwicandelo lezomthetho, kodwa ngenjongo yoku, ngokusebenzisa olu nxibelelaniso, ichaphazela inqanaba lerhafu yezemali ngokwenza le yokugqibela ixhomekeke kule yangaphambili. Ukongeza, wongeza ukuba iyasebenza kuzo zombini izinto zikawonke-wonke nezabucala. Ngokujikeleza ujikeleze ipropathi, inokusetyenziswa ngasese kwaye esidlangalaleni kwaye, kuzo zombini iimeko, kuluhlu olubanzi lwezinto ezinokwenzeka.
Este Isidanga semasters Sisiphakamiso semfundo se-Univesitat Politècnica de València sokuba, nangona ababhalisi bebonakalisile ukuba bayayixhasa, kwihlabathi liphela banobizo lobuchwephesha, ke ngoko Umbutho waseSpain weeNgcali zeJometri usetyenziswe njengabacebisi abaziingcali. Nangona kunjalo, kwaye ngenjongo yokufuna unxibelelwano olufanelekileyo kunye nabasebenza kwezomthetho, kwenziwe iinzame zokutshintsha i-ajenda kwiiprofayili ezahlukeneyo. Kungenxa yoko le nto isidanga senkosi sahlulwe saziidigri zeyunivesithi ezahluliweyo, nangona zibangela umdla xa zizonke, enye ijongana nenxalenye yezobuchwephesha kwaye enye isemthethweni kuphela, ngenjongo yokukwazi ukuxhasa ulwazi olusisiseko lwabo bobabini abomthetho, Ityala lokuqala, njengobuchwephesha, kwelesibini.
Njengoko kubonisiwe nguGqirha Garrido, iqela elinomdla liya kuba nakho ukukhetha phakathi kweedigri ezahlukeneyo: iDiploma yoBuchule kwiiJometri zezoMthetho, iNgcali yeDyunivesithi eGeoreferencing kunye neMasters kwiJometri yezomthetho. Umzekelo, abo banqwenela ukufumana isihloko seNgcali yeYunivesithi eGeoreferencing, bebhekisa kwicandelo lomhlaba le-Master, kufuneka bapase imodyuli II kuphela, ngakumbi izifundo zeTopography, Geodesy, Cartography kunye neJogographic Information Systems ezisetyenzisiweyo kwizakhiwo nomhlaba.
Kwimeko yeDiploma yoBuchule kwiiJometri zomthetho, iModyuli I kunye neModyuli III kufuneka zipasiswe. Ukuhlangabezana neenjongo zokufunda, umfaki-sicelo uya kuba neeklasi eziphambili ngewebhu-ehanjiswe yinkomfa yevidiyo ngexesha langempela-; kwaye kamva irekhodwe ukufikelela kwimowudi yokulibaziseka.
Ngoku makhe sijonge, injongo ye-Master kukuba isidanga sibe nezixhobo eziyimfuneko zokwenza ulwahlulo lwepropathi yepropathi ukulungiselela iinjongo zecadastral okanye zobhaliso, balicacisa gca icandelo lomhlaba, ngenxa yoku, iicografi kunye nejogomathi zidlala indima ebalulekileyo. UGqirha Garrido ugxininisa ukuba akunakwenzeka ukuchaza ijiometri yepropathi, nefuthe elinokuba nalo ngokubhekisele kungquzulwano noxolo kwezentlalo ngaphandle kweyona ndlela ifanelekileyo, ubuchule kunye nolwazi malunga noku, ubume bendawo, Iicartography, iiNkqubo zeNgcaciso zeJografi
Kwangokunjalo, iyaqaqambisa ukuba, nangona sikwixesha apho sibheja kwi-3D cadastre, isidanga senkosi asijonganga kungenelelo lwe-cadastral, nangona iya kuba nezinto ezichaphazelayo. Ngayiphi na imeko, kwaye nangona imibutho yamazwe aphesheya, efana ne-FIG, ibibheja kwimodeli ye-3D Cadastre phantse ishumi leminyaka, eSpain iyaqala ukwenziwa ngalo mzuzu, ke ukujongana nalo mbandela kuya kuba nzima. Yintoni le inkosi eyijongayo yimibandela yamalungelo okwenyani kunye nokusikelwa umda kulawulo okuwela kwizinto zejografi, kwaye ke oko kunika intsingiselo kwi-cadastre ye-3d engaphaya kokumelwa-ntathu.
Ukuza kuthi ga ngoku siyazi ukuba i-Master ijolise kwiingcali ezinqwenela ukufumana uqeqesho olubanzi-olusemthethweni kunye netekhnoloji- ye ulwahlulo oluchanekileyo lokuthengiswa kwezindluKe ngoko, ulichaza eli gama njengongenelelo lwegcisa elinika ukuqiniseka, ukuthembeka kunye nokuvuma uxanduva lomsebenzi wenkcazo yejiyometri; into ethi, nangona ibonakala ingakholeki, ayisiyomfuneko eSpain.
Kwelinye icala, kukho iziphene ezinkulu kulwahlulo lwezindlu nomhlaba, ke umsantsa osisiseko ekufuneka uzalisiwe kukusilela kweprofayili yobuchwephesha ngolwazi olubanzi lomthetho. Into ethile ngokungathandabuzekiyo iyimfuneko ukuba sithathela ingqalelo into yokuba ipropathi ngumcimbi ovela eMthethweni kwaye uhlala uchaphazeleka kuwo - ukusikelwa umda kwezomthetho, ukuphungulwa kolawulo, imiba yasezidolophini, umthetho werhafu, njl.
Makhe sithethe ngotshintsho olukhawulezileyo kwitekhnoloji (inyani yokwenyani, ukungongeza, i-Iot) kunye nophuhliso / nokusetyenziswa kwendawo, nangona kunjalo, igalelo le-Master kwi-4 yexesha ledijithali aliqinisekanga. Kuqala kwaye kunikwe ukuba, njengoko bekutshiwo, i-3D Cadastre inomiliselo olulinganiselweyo eSpain, ngenxa yokuba ibandakanya kuphela izinto ezime-ntathu ngaphandle kwenkcazo esemthethweni esebenzisana nemo engqongileyo, kunye nomzekelo wayo yonke le nto iipropathi zohlobo Umgangatho apho kungekho sisombululo sidibeneyo sibakhuselayo. Kwangokunjalo, ulwakhiwo, ngakumbi oluphantsi komhlaba, lunefuthe elisemthethweni nakwezomzimba kwiipropathi zabucala nezikarhulumente, kwaye ke ngoko kubaluleke kakhulu ukuba kuthathelwe ingqalelo kwizicelo ezingqinisisiweyo zokwenyani. Ke ngoko, ukudityaniswa kweenkqubo zejometri zomthetho kunye ne-BIM kunye nemeko ezifanayo yindawo yokuhlola.
Emva kokwazi injongo "yeJometri yezomthetho", uNatalia uthethe nathi malunga nokusebenzisana kunye nokukhuselwa kwedatha, egxininisa ukuba ijiyometri esemthethweni sisixhobo sokufumana, ukuqhubekeka, ukusetyenzwa kunye nokuqinisekiswa kwedatha yomzimba neyomthetho? Inkqubo ebandakanya olu lwazi kunye nokusasazwa kwayo sisicelo esicinga ukuba luxanduva loorhulumente lokuphuhlisa.
Le nkqubo, ngoku iseSpain, isasazeke phakathi kwemibutho eyahlukeneyo, enje ngecadastre, iirejista zepropathi, amaziko ocwangciso lweedolophu zikamasipala, kunye nolawulo lwecandelo (abanini bommandla woluntu). Umxholo wedigri ye-master kukubonelela ngezakhono zokwazi ngokweenkcukacha ukusebenzisana kwale nkqubo ayisebenzi kuphela ukuyisebenzisa kwixesha elifutshane, kodwa ikwakhuthaza nokuphuculwa kwexesha eliphakathi nelide.
Singathi emva koko iJometri yoMthetho iza kuza ukuze icwangcise ubungakanani beenkcukacha ezizimeleyo, eziphakanyiswe ngendlela esasaziweyo kwaye ngaphandle kwenjongo ethile. Umbono wokwenziwa kweprojekthi uvela eLa Umbutho waseSpain weNgcali yeGeometrists ephakamise uqeqesho olungafakwanga kwiSikolo samaBanga aPhakamileyo seGeodetic, iCartographic kunye neTopographic Engineering kwiPolytechnic University yaseValencia. Emva kokuvavanya ukusebenza, waphakamisa ukubanakho ukuphuhlisa inqanaba lakhe kuluhlu lwezifundo oluza kuphonononga le mfuno yentengiso.
Njengoko sisidanga se-Master sokuqeqesha iingcali, ootitshala ziingcali kwizifundo abazifundisayo, nokuba ngoonjingalwazi baseyunivesithi (abavela kwiYunivesithi yasePolytechnic yaseValencia kunye neDyunivesithi yaseValencia), okanye ukuba bavela kwimibutho esemthethweni (National Geographic Institute , Ubhaliso lweZakhiwo, iCadastre ...), okanye umhlaba womsebenzi. Ngale ndlela, ukuququzelela uxolelwaniso nomsebenzi womsebenzi wabafundi, iiklasi ziya kudluliswa ngokusasaza kwaye ziya kurekhodwa ukuze zikwazi ukubonwa ukulibaziseka.
Ngokunxulumene noncedo lwezezimali okanye ufundiso, uGqirha Garrido wathi "Okwangoku akukho ncedo lolu hlobo, njengoko sisiqinisekiso sePolytechnic University yaseValencia, ayilungelanga uncedo olusemthethweni." Iqela elinomdla linakho bhalisa Ukusuka kwiwebhusayithi yenkosi, kukho lonke ulwazi malunga neendleko zemfundo ezinokufakwa isicelo.
Okungakumbi malunga noMphathi
Ukuqukumbela, makhe siqwalasele indawo eqhubeka ngokutshintsha kakhulu, kwabanye iba sisibonelelo, kwaye kwabanye yingxaki enkulu. Inyani yokuba izixhobo kunye neeasethi zimiselwe ngokuchanekileyo, zivumela ezinye iinkqubo ukuba zenziwe ngokufanelekileyo, kwaye ke inegalelo elihle kuphuhliso lwe-geospatial.
Sisoloko sithetha ngento efunekayo ukuze ulungele indawo njengeSixeko esiSmart okanye iSixeko esiSmart, iya ngaphaya kokudityaniswa kweTekhnoloji yoLwazi kunye noNxibelelwano, izinzwa okanye abanye; inyathelo lokuqala kukwazi ukuba yintoni na, iphi kwaye yeyiphi eyona ndlela ilungileyo yokusebenzisa.
Ngokucaca malunga nazo zonke ezi ngcinga, sinolwazi oluhlaziyiweyo lwendawo, kwaye siyivumele ukuba ifikeleleke kuzo zonke iintlobo zoluntu, sinokuqala ukuphinda sicingisise ngoko sifuna ukukufumana kunye nendlela yokufumana oko. Kwaye kongezwe koku, iingcali eziqeqeshiweyo ezinezixhobo ezifanelekileyo ziyafuneka ukujongana nayo yonke imiceli mngeni ebandakanyekayo ekusombululeni eli xesha ledijithali le-4. Ungayijonga yonke incoko noGqirha Natalia Garrido e Imagazini yeTwingeo uHlelo lwesi-5.